रहेनन् जीवराज दाइ | चितवन पोष्ट
रहेनन् जीवराज दाइ
चितवनको माटोमा नाम र दाम दुवै कमाउन सफल चितवन पोष्ट दैनिकका दाहिने हात धर्मराज अर्यालको करिब ९ महिनाअघि निधन भयो । दाहिने हात नरहेपछि एउटा बाँकी रहेको हात प्रबन्ध सम्पादक जीवराज अर्यालको पनि यही फागुन महिनामा अकस्मात् निधन भयो । स्वर्गीय धर्मराज र जीवराज अर्याल दाजुभाइ थिए ।
धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यो सत्य पत्याउँदैनन् कि संसारमा सबैभन्दा कठिनमध्येको कठिन काम नियमित पत्रिका प्रकाशन हो । यो काम औधी कठिन भएको हुँदा नै नेपालमा जन्मिएका हजारौँ पत्रपत्रिकाहरु जन्मिँदै मर्दै गरे । कोही चाँडै मरे भने कोही ढिला मरे, मर्नचाहिँ नेपालमा हजारौँको संख्यामा पत्रपत्रिका मरे । तर, चितवन पोष्ट दैनिकले जतिसुकै कठिन अवस्था किन सामना गर्न नपरोस्, बन्द भएन ।
कहिलेकाहीँ धर्मराउनु बेग्लै कुरा हो, तर चितवन पोष्ट अघि बढिरह्यो । साप्ताहिकबाट दैनिकमा आउनु झनै कठिन काम थियो, तर चितवन पोष्ट दैनिक प्रकाशन हुन थालेपछि पनि यसले निरन्तरता पाइरह्यो । खासगरी, चितौने जनताको स्नेह र विश्वास यो दैनिकले पाउनु यसले निरन्तरता पाउनमा कारण हो, तर त्योभन्दा विशेष कारणचाहिँ स्वर्गीय धर्मराज र जीवराजको मेहनत र लगनशीलता नै हो । यो वास्तविकता चितवनका सञ्चारमाध्यमको मह¤व बुझ्ने प्रायः सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । चितवन पोष्टले निरन्तरता पाउँदा नेपाली जनताले आफ्नो सुसूचित हुने अधिकारको भरपूर उपभोग गरे ।
आफू जीवित छँदा धर्मराज र जीवराजले आफू पछि खाने तर चितवन पोष्टमा काम गर्नेहरुलाई पहिले खुवाउने नीति अवलम्बन गरे, जसको कारण पत्रिका जीवित रह्यो र जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाए । यो श्रेय स्वर्गीय अर्याल दाजुभाइलाई नै दिनुपर्छ, यद्यपी तलब लिएर पत्रिकामा काम गर्ने जनशक्तिको पनि रगत–पसिना पत्रिकाका लागि बगेको छ । कसैले पत्याउला/नपत्याउला, पत्रिकाको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएरै भन्नुपर्छ वा कसैले नियतवश पनि नदिएका हुन सक्छन्, प्रायः पत्रपत्रिकाले आफ्ना कामदारहरुलाई पुग्ने तलब त दिएका छैनन् नै, ठीक समयमा पनि दिन सकेको अवस्था छैन । तर, अर्याल दाजुभाइले तलबको मामलामा आफ्ना कामदारको मन रूवाएको कहिल्यै कतै सुनिएन ।
संसारका सबै उद्योग र कलकारखानाले सफलता हात पार्न इमानदार कामदारको सहयोग प्राप्त भएको अवस्थालाई प्रमाण मान्दा यो भन्न सकिन्छ कि अर्याल दाजुभाइले आफ्ना कामदारलाई हरेक कोणबाट खुसी पार्ने प्रयास गरे, त्यसको परिणाम चितवन पोष्ट आजसम्म जीवित रह्यो । अन्य पत्रपत्रिका बन्द हुनुमा कामदारप्रेमी भावनामा कमी हुनुलाई पनि मान्न सकिन्छ । अब चितवन पोष्टले निरन्तरता पाउँदा जनता सूचना पाउने अधिकारका हिसाबले लाभान्वित भएको मात्रै साँचो होइन, साँचो त के पनि हो भने चितवन पोष्ट यति लामो समयसम्म बाँच्दा यसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई धान्न मद्दत पु¥याउँदै ठूलो संख्यामा पत्रकार उत्पादन गर्ने काम ग¥यो । अहिले पनि चितवनमा क्रियाशील थुप्रै पत्रकारहरु यही चितवन पोष्टले जन्माएका पत्रकारहरु हुन् भन्दा गलत हुँदैन ।
यो चितवन जिल्लामा मात्र होइन, यसले जन्माएर हुर्काएका पत्रकारहरु देशको राजधानीदेखि अन्य जिल्लामा समेत कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसो त, यो पत्रिकामा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका पत्रकारहरु आफ्नो योग्यता र खुबीको बलमा विदेशमा गएर समेत पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।
प्रस्ट देखिएको छ– चितवन पोष्टले जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गरेको छ भने रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै पत्रकार उत्पादन गरेर देशलाई लाउनसम्मको ठूलो गुन लाएको छ । रोजगारीको कुरा गर्दा चितवन पोष्टप्रति झनै श्रद्धाभाव उर्लेर आउँछ । यो पत्रिकाले दर्जनौँ पत्रिका वितरकलाई रोजगारी दिएको छ । यो पत्रिका वितरकका रुपमा लामो समयसम्म निरन्तर वितरण कार्यमा समर्पित कामदारहरु थुप्रै छन् । चितवन पोष्ट वितरणबाट चित्त नबुझेको वा परिवार पाल्न धौधौ भएको भए त्यति लामो समयसम्म कोही पनि टिकेर काम गर्न सक्दैन, जब कि चितवन पोष्ट बिहान बिहान जनताको घरघरमा पु¥याउने पुराना कर्मचारीहरु बग्रेल्ती छन् । नेपाली हुनुको नाताले एक नेपालीको आनीबानी अर्को नेपालीलाई थाहा नहुने कुरा भएन । सबैलाई थाहा भएको विषय के हो भने यो देशमा कसैले कसैलाई काम लगाएर खान औधी धौधौ छ । कामदार भनेको कामदार हो । उसको पनि मानसम्मान र सुविधाको सवाल हुन्छ ।
जहाँ दाम र सम्मान दुवै पाइन्छ काम गर्नेहरु त्यहाँ टिक्छन्, होइन भने आफ्नो झोली–तुम्बो बोकेर अन्त कुदिहाल्छन् । यो समस्या चितवन पोष्टले बिरलै भोग्नुप¥यो, किनकि चितवन पोष्टको उ बेलादेखि अहिलेसम्मको व्यवस्थापन पक्ष अर्थात् मर्नुअघि अर्याल दाजुभाइले आफ्ना वितरकहरुलाई समेत मान र दाम दुवै दिएर सन्तुष्ट तुल्याएका थिए । यस्ता कारणहरुको एउटा पोकोले चितवन पोष्ट आजसम्म धानियो, तर अब पुरानो नेतृत्व बिलायो अर्थात् अनुभवी पत्रकार र व्यवस्थापकको अन्त्य भएको अवस्था छ । अब यो पत्रिका कसरी अघि बढ्ला, चितवन पोष्टप्रेमीहरुलाई पीर लाग्न सुरू भइसकेको छ ।
पत्रिका एकदिन दुईदिन प्रकाशन गरेर काम चल्दैन, प्रत्येक दिन प्रकाशन हुनुपर्छ त्यो पनि ठीक समयमा बिहान सबेरै । एकातिर विश्वभरिका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य विषयहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गरी ताजा विषयमा सम्पादकीय लेख्ने जिम्मेवारी छँदैछ, चितवन र आसपासका घटनाहरुलाई जस्ताको त्यस्तै उतारेर सम्पादकको टेबुलमा ल्याउने पत्रकारसँग समन्वय गरिरहने सम्पादक र व्यवस्थापक चाहिन्छ । त्यो काम अब कसले सम्हाल्छ, त्यो विषय सामान्य विषय होइन । प्रकाशित पत्रिका ठीक समयमा पाठकहरुको हातहातमा पुगे/नपुगेको हेर्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यवस्थापकको हालै निधन भएको हुँदा यो जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल हुन सक्छ । पाका र अनुभवीहरु कम रिसाउने र युवाहरु युवा जोशकै कारण ज्यादा रिसाउने हुँदा विभिन्न खाले जिम्मेवारी सम्हालेका कामदारहरुसँग पहिलाको जस्तै व्यवहार गर्न सक्ने/नसक्ने विषय चानचुने विषय होइन । रिस खप्न सक्ने क्षमता सानो क्षमता होइन, अरुसँग हाँसेर नरम बोल्न यो युगका मान्छेलाई निकै गाह्रो छ । फेरि पुरानो व्यवस्थापकले खनेको गोरेटो जस्ताको तस्तै पत्ता लगाएर हिँड्न उतिसाह्रो सजिलो हुँदैन पनि । यस्ता कारणहरुले चितवन पोष्टलाई माया गर्ने पाठकहरु चिन्तित देखिएका छन् । यो चिन्ता चितवन पोष्टको निरन्तरताका लागि हो, अन्य कारणले होइन ।
अब चर्चा गरौँ व्यवस्थापक जीवराज दाइको स्वर्गारोहणबारे, जुन चर्चाले पाठकहरुलाई केही नयाँ जानकारी प्राप्त हुन सक्छ ।
मृत्युवरण गर्नु झन्डै १० दिनअघि जीवराज दाइले एकाबिहानै मेरो मोबाइलमा घण्टी बजाउनुभयो । मैले हेल्लो भन्नेबित्तिकै “मेरो भाइ, म त पूरै टुहुरो भएको छु । म त एक्लो भएको छु । तिमी कहिलेकाहीँ मकहाँ आउँदै गरन भाइ” भन्नुभो । मैले ओछ्यान छाडेको पनि थिइनँ ।
जीवराज दाइले यस्तो दुःख किन पोखे होलान्, अचम्म मान्दै मैले “दाइ, किन पीर मान्नहुन्छ, आखिर पीर मानेर पो के हुन्छ र ? हरेकले यो धर्ती ढिलो–चाँडो छाड्नैपर्छ, कर्तव्य पालना गर्दै जाने, जुन दिनमा जाने आदेश आउँछ त्यो दिन जाने ।” मैले यो पनि थपेँ, “दाइ, हेर्दा नजिकमा सबै आफन्त छन् भने पनि मर्दाका बखत एक्लैएक्लै जाने हो, त्यस कारण हामी जन्मैदेखि एक्लैएक्लै छौँ दाइ ।” जीवराज दाइ मेरो कुरा सुनेपछि केही सम्हालिनुभयो ।
“ल भाइ, तिम्रो पैसा लिन आऊ” पनि भन्नुभयो । मलाई चितवन पोष्टमा लेख लेखेबापत् यो पत्रिकाले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार केही रकम दिने गरेको छ । जीवराज दाइले अकस्मात् रूँदै त्यस्तो बचन बोलेको मैले पत्रकार मित्र नवराज ढकाललाई सुनाएको थिएँ । उनले पनि “त्यस्तो पीर त नमान्न पर्ने, के भएछ कुन्नि” भने । अहिले मलाई यस्तो लाग्छ, जीवराज दाइले “भाइ, म एक्लो भएँ” भनेर रूनुको अर्थ कतै मृत्युले पूर्वजानकारी दिएको त होइन ? होइन भने झन्डै ६० वर्षमा पाइला टेक्न लागेको पुरूष त्यसरी एकाबिहानै रूनु सामान्य विषय हुँदै होइन । उसै त, हाम्रो समाजमा बाआमा मर्दासमेत छोरो मान्छे रूनुहुन्न भन्ने चलन छ । यो कुरा जीवराज दाइलाई थाहा नभएको पनि होइन ।
अर्याल दाइलाई खासगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । चुरोट सल्काइरहने र तानिरहने दाइको बानी चिन्नेजान्ने सबैलाई थाहै थियो, बोल्दा स्वाँस्वाँ गर्ने, खोकिरहने, जतिसुकै खोके पनि चुरोट सल्काउन र लामो कस तान्न नछाड्ने उहाँलाई सुगर, प्रेसर, दम वा अन्य के–के रोग थियो त्यो जानकारी भएन, तर अर्याल दाइ बिरामीजस्तो सधैँभरि देखिनुहुन्थ्यो । अकस्मात् बिरामी भएको र उपचार गर्दागर्दै उहाँको निधन भएको खबर प्राप्त भयो । सुन्दा चक्करै लाग्यो । आफूलाई माया गर्ने मान्छे बित्दा कसलाई नरमाइलो नलाग्ला र मलाई नलागोस् । ज्यादै नरमाइलो लाग्यो ।
चितवन पोष्टका अर्याल दाजुभाइ बिते । म पनि मर्ने लाइनमा उभिएको छु । हुन त, संसारका सबै जीवित मान्छेहरु जन्मेको दिनदेखि नै मर्ने लाइनमा उभिएका छन् । लाइनमा उभिएको मेरो कुन दिन मृत्यु हुने हो थाहा छैन । यही अन्दाजका कारण पनि मैले जे राम्रो काम गर्नुछ त्यो तुरून्त गर्ने योजना बनाउँछु । सके अरुलाई सहयोग गर्ने नसके कुनै हानिनोक्सानी नपु¥याउने मेरो पुरानो बानीलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छु । आज यो म¥यो, ओहो ! भन्यो । भोलि त्यो म¥यो ओहो ! भन्यो । चिनेजानेका र नजिकका ठानिनेहरु मर्दै जान्छन्, ओहो ! भन्दै गयो । एकदिन मेरै मृत्यु हुन्छ । मलाई चिन्ने र ठीक मान्नेहरुले ओहो ! भन्छन् । मृत्युको केही समयपछि सबले सबैलाई बिर्सिन्छन् । आखिर मानवजगत्को नियति नै भगवान्ले यस्तै तोकिदिएका छन् त कसको के लाग्छ ? भाइ हुनुको नाताले दाइ जीवराज अर्यालको कतै स्वर्ग छ भने त्यतै बास प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु । स्वर्गीय धर्मराज र जीवराज अर्यालको अनुपस्थितिमा पनि चितवन पोष्टले निरन्तरता पाइरहोस् । चितवन पोष्ट परिवारप्रति हार्दिक समवेदना !